Mahajamba anefa ity areti-maso iray ity raha vao tsy voatsabo haingana amin’ny alalan’ny fandidiana ka tsy tokony hatao ambanin-javatra. Misy ihany koa ny areti-maso “conjoctivite” izay nambaran’ny mpitsabo fa aretina mpiseho mandavan-taona. Miseho amin’ny alalan’ny maso menamena, mamoaka tai-maso ary mangidihidy izy io izay marihina fa mifindra haingana dia haingana tokoa amin’ny alalan’ilay ranomaso mipetaka amin’ny tanana iny raha tsy voasasa amin’ny savony. Mety hahavoa ny olona iray trano na iray tanàna ity karazana areti-maso iray ity raha tsy mitandrina ilay marary. Misy ihany koa ny areti-maso vokatry ny laim-bary miparitaka raha araka ny fanazavan’ny dokotera hatrany, tranga mpahazo ireo olona any ambanivohitra. Mpitsabo maso maromaro no niatrika fiofanana momba ny fitsaboana izany teny amin’ny FLM Ambohibao ny herinandro teo, miparitaka amina distrika maro eto Analamanga.